Lumanu: Fumana iimpembelelo kwaye ufumane umxholo onefuthe | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 14, 2016 NgoMvulo, Agasti 15, 2016 Douglas Karr
Ukwandisa ukufikelela kumxholo wakho kubalulekile. Nokuba uzama ukukhula kwinqanaba lakho lezinto eziphilayo ngokwenza ukuba umxholo wakho ungqinwe kwaye uqhagamshelwe kwiindawo ezinamagunya aphezulu, nokuba uzama ukwandisa ukufikelela kwakho kwezentlalo kubaphulaphuli abafanelekileyo, nokuba uzama ukwakha igunya kwishishini lakho Ngokukhankanywa kumntu onefuthe… intengiso yempembelelo kufuneka.
Intengiso yempembelelo yahlulwe yangamacandelo amabini abalulekileyo
Ngoobani abachaphazelayo enokufikelela kubaphulaphuli abaninzi, ababandakanyekayo ozama ukufikelela kubo ngaphambili?
Yintoni eyahlukileyo nenolwazi umxholo eza kutsala umdla wabaphembeleli?
Eyona ndlela isebenzayo yokusebenzisa abaphembeleli beemeko ezahlukeneyo
Ixabiso lempembelelo liyafana nesicwangciso sokuhambisa imithombo yeendaba. Iimpembelelo ezahlukeneyo ziya kuba zilungele ukuthengisa ezahlukeneyo kunye neenjongo zeshishini. Apha ngezantsi zineenjongo ezimbalwa esidibene nazo kunye nezinye zeendlela ezilungileyo zokusebenzisa iimpembelelo ezifanelekileyo
Eyobudlelwane boluntu -Ukufutshane ekuqeshweni kwearhente ye-PR ebiza kakhulu, usebenzisa uLumanu ukuchonga intatheli kunye neebhlogi ezigxile ekuxoxeni ngeendaba ngesihloko sakho esithile kubalulekile ekuqhubeni izithuthi kwizigaba eziphambili (umz., Imveliso entsha, inkxaso-mali, njl.njl.). Ngokuchonga abanokuba ziintatheli kunye nokusingatha ukufikelela eluntwini, inkampani iya kuba nakho ukulugcina olo lwalamano ngokuchasene nokuluyeka kwinkampani ye-PR. Oku kuya kuba luncedo ekuhambeni kwexesha njengoko kuya kuba lula ngakumbi ukuba babhale malunga nezinto ezonyukayo / izibhengezo
Ingxelo yeMveliso kunye neNqaku -Abaphembeleli ziingcali kwaye bathembeke kakuhle kubaphulaphuli babo, ngokuqonda okunzulu ngendawo abayigubungelayo. Benza iibhodi ezinesandi ezigqwesileyo zeemveliso ezintsha, amanqaku, okanye notshintsho-kumkhombandlela weemveliso ezikhoyo. Sibonile ii-brand ezinkulu zisebenzisa i-influencers xa ziqonda i-pros kunye ne-cons yokungena kwindawo entsha. Abaphembeleli bahlala benomdla xa benikwa ithuba lokunika ingxelo ngemveliso entsha okanye umnikelo.
Ukudalwa kokuqukethwe -Ukusebenzisa ifuthe lokwenza umxholo wentengiso yakho kunesibonelelo esongeziweyo sokwakhelwa abaphulaphuli abanokuphembelela umxholo. Nokuba sisifundo semveliso okanye uhlalutyo lokhuphiswano, amandla okuphembelela uyilo lomxholo aqinisekisa ukuba umxholo wakho uya kuba ngumgangatho ophezulu kwaye ubonwa ngabantu abafanelekileyo. Icebo kukufumana kungekuphela eyona mpembelelo ifanelekileyo, kodwa ikwanayo nembali yokudala iintlobo zomxholo osebenzayo ofuna ukuwenza.
Iimpawu zomkhiqizo -Ngokuba ube kwi-radar yempembelelo, uphawu lunokonyusa isabelo sabo selizwi. Siye sayibona eyona ndlela ilungileyo yokwakha ukuthembeka kwi-brand yakho kwaye siyigcine kukusoloko siphambili kwingqwalaselo yabaphulaphuli bakho. Ayinamsebenzi ukuba abo baphulaphuli bazele zii-CTO okanye umama wakho wasekhaya, imiba yokuvezwa kwegama. Abaphembeleli ngokwendalo bafuna ukwenza umxholo wokuzibandakanya, kwaye ukuba ungabanceda ngedatha enomdla okanye iikowuti zolwazi- ziya kukunceda ufike phambi kwabantu abaninzi.
Luman liqonga lokuqala kunye nokuphela kokwenza impembelelo yesiko kunye negrafu yomxholo kumsebenzisi ngamnye, kwisihloko ngasinye. Oku kuthetha iziphumo ezichaphazelekayo eziba bhetele ngokuhamba kwexesha. Iinjongo zabo kukuthatha iseti yegalelo lamagama aphambili kwaye bavelise abona bantu babalaseleyo kwidijithali nakwintlalontle, kwaye benze ukufikelela kulwakhiwo kunye nolwalamano ulwalamano olungenantlonelo kangangoko.
ILumanu yakha igrafu yempembelelo yexesha-lokwenyani ngokusekwe kwisihloko esinikiweyo. Ngokusekwe kumxholo wethu we-centric approach, uqinisekisiwe uluhlu lwabaphembeleli abenziwe ngokwesihloko sakho-esiba ngcono nangakumbi ngokunzulu ekuhambeni kwexesha.
Iimpembelelo, idatha yezentlalo kunye nokuzibandakanya, kunye nomxholo wazo ofanelekileyo kukucofa nje kude. Iqonga lakhiwe ngomgaqo-nkqubo olungileyo wokujonga kwi-Influencer njengesixa somxholo + wabo weemetric, hayi i-Twitter bio yabo kuphela. Oku kuvumela ukufikelela kulungelelwaniso oluphezulu olubonakalisiweyo ukuba luphumelele kabini kunendlela ebandayo yokufikelela.
Imeko yobugcisa bokulungiswa kolwimi lwendalo (i-NLP) ii-algorithms zokukhupha imixholo kumxholo othandwayo wesihloko sakho ukunika umbono wokuba yintoni abantu ababandakanyekayo kuyo. Idatha ye-CPC kunye nokhuphiswano lwentengiso inika isibonakaliso sokuba luxabiseke kangakanani ukugcwala kwezithuthi (i-CPC ephezulu kunye nokhuphiswano lwentengiso kuthetha ukuba abachaphazeli kuloo ndawo babaluleke kakhulu kuba abaphulaphuli abanomdla kule mixholo ngabathengi abaxabisekileyo).
Iinkampani zabo bonke ubukhulu ziyaxhamla kakhulu ekuchongeni kuphela abona banefuthe elifanelekileyo kodwa kunye nokuzibandakanya ngokuqhubekayo ukuvelisa iziphumo zeshishini lokwenyani.
Zama uLumanu mahala
tags: ukudalwa komxholocurateumxholo wekharityhulamfumanisa umxholofumana abachaphazelimpe mbeleloimpembelelo kwintengisoukufunyanwa kweempembeleloimpembelelo kwigrafuEyobudlelwane boluntu
Yintoni iGoogle RankBrain?